China အသိဉာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာသည့် Socket ပေါ်ပေါက်လာခြင်းလမ်းညွှန်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | အိုဟမ်
အသစ် IP66 ရေစိုခံ switch ကို Socket
IP44 ရေစိုခံ Socket
IP66 ရေစိုခံ switch ကို
86 အမျိုးအစားရေစိုခံ box ကို
အချည်းနှီးသော box ကိုစီးရီး
ယိုစိမ့်ကာကွယ်မှုစီးရီးနှင့်အတူ socket ကိုပြောင်းလဲပါ
Switch socket စီးရီး
RCD စီးရီးနှင့်အတူ socket switch
IP66 ရေစိုခံ Box အမျိုးအစား Switch Socket
အဆိုပါအသိဉာဏ်အလိုအလျောက်အော်ပရေတာ socket ပေါ်လာ Operating ညွှန်ကြားချက်
အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - ရုံးသုံး desktop၊ ပလက်ဖောင်း၊ ကွန်ဖရင့်၊ မီးဖိုချောင်စားပွဲ၊ ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံအတွက်အသုံးများသောထုတ်ကုန်များ ETC အသုံးပြုမှုနည်းလမ်း - အစပထမ ၃ ပတ်စက္ကန့်၊ အလယ်တွင် round round ခလုတ်ကိုကြာရှည်စွာနှိပ်ရမည်။ အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်လျှပ်စစ်လိမ့်မည် th ...
ရုံးစားပွဲ၊ ပလက်ဖောင်း၊ ကွန်ဖရင့်၊ မီးဖိုချောင်စားပွဲ၊
အစပိုင်း၌ 3seconds အတွင်းအလယ်ရှိ round round ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်၍ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောစနစ်ကိုလျှပ်စစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ မီးလင်းနေသည့် LED မီးများရပ်တန့်ရန်ဒုတိယ၊ အလယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ လျှို့ဝှက် socket box သည်အလိုအလျောက်မြင့်တက်လာမည်။ ဘယ်တော့လဲ
စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးပါက socket box ကိုပြန်လည်ရယူလိုပါကအလယ်ခလုတ်ကိုအလင်းရောင်အနည်းငယ်သာနှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခါအသုံးပြုရန်ဆန္ဒမရှိလျှင်၊
3seconds အတွက် round button ပါ ၀ င်ပြီး lift system ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
ကုန်ပစ္စည်းမြင့်တက်မှုတွင် ၃ စက္ကန့်ကြာသည့်အထိပတ်ပတ်လည်ခလုတ်ကိုကြာရှည်စွာနှိပ်နိုင်ရန်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ၃ စက္ကန့်ကြာအောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါကအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောစနစ်ကိုလျှပ်စစ်မီးပေးလိမ့်မည်။
ကလေးများ၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန် ပို၍ ကောင်းသည်။
2. LED မီးဒီဇိုင်း:
ထုတ်ကုန်များသည်အသုံးပြုသောအခြေအနေအတွက်အဖွင့်တွင်ရှိပြီး၊ ring LED မီးပွင့်နေလိမ့်မည်။
Button lights, အလုပ်ခွင်ဒီဇိုင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပွင့်လင်းသောအနေအထားဖြစ်သည်။ အလယ်တန်းရှိ round round ကို 3seconds အကြာတွင်ကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ light button ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
3. ဆန့်ကျင် pinch function ကို
Recovery level ရောက်နေပြီဆိုရင် interval မှာ items တွေရှိတယ်။ နောက်3စက္ကန့်ကြာအောင် socket ကရပ်နိုင်ပါတယ်။
4. တိုက်မှုဆန့်ကျင် function ကို:
ယင်းသည်မြင့်မားသောအဆင့်တွင်ရှိပါကမည်သည့်အရာမျှမကြားရတော့ပါ။ နောက် ၃ မိနစ်အကြာတွင် socket သည်ရပ်တန့်သွားနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ WiFi စမတ်ရေစိုခံ Socket အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
2 ဂိုဏ်းဂျာမန် (အီးယူ) Socket
1 Gang German (EU) Socket + 1 Gang တယ်လီဖုန်းဆိပ်ကမ်း
ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အသွေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသူအသစ်များအကြားတန်ဖိုးထားမှုတို့ကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။
Xixi ကျေးရွာ Huheng Liushi Yueqing City Zhejiang China
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့: